I-samsung inokuyeka ukuthengisa i-galaxy note 10 nje ukuba kuphume inqaku lama-20
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isamsung inokuyeka ukuthengisa i-Galaxy Note 10 nje ukuba kuphume iNqaku 20
UHLAZIYO: I-Samsung Galaxy Note 20 kunye neNqaku 20 Ultra ngoku zisemthethweni .
Ngokwengxelo yakutshanje, intengiso yekota yesibini yakwaSamsung yayimbi kangangokuba IHuawei ikwazile ukuyifumana . Kwiimeko eziqhelekileyo, le nto ayizukufika isimanga, inikwe ukuba inkampani yaseTshayina ibikhula ukuthengisa kwayo nge-smartphone ukusukela ixesha elithile ngoku. Yintoni ebangela ukuba ezi ziphumo zibenomdla kukuba uHuawei ukhubazekile ngenxa yokohlwaywa e-US kwaye ubukhulu becala ubenomda kwilizwe lakhe.
Ngokuqinisekileyo, iyanceda into yokuba i-China ishukuma kancinci ngelixa ii-odolo zokutshixa zisendaweni yamazwe amaninzi. Oko kuchaza ngokuyinxenye ukuba kutheni iintengiso zeSamsung kunye neeapos zityibilikile kwiipesenti ezingama-30 ngonyaka-ngekota. I-chaebol inomda okhoyo kwilizwe. I-Apple ikwenze kamnandi e-China, ukuthengisa nge-iPhone ukutsiba iipesenti ezingama-225 zekota kwikota kunye neepesenti ezingama-32 unyaka nonyaka.
Kodwa ngaba i-coronavirus yesona sizathu sokuthengisa kwe-Samsung & apos; ukubandezeleka? Inkampani ayinakuze ivume esidlangalaleni ukuba i-Galaxy S20 sele ikhona ukwenza kakubi kwaye kukholelwa ukuba amaxabiso ayo aphezulu sesona sizathu siphambili sokuthengisa okungathandekiyo. Okwangoku, iSamsung ibonakala ngathi ayikho kwimeko yokufunda isifundo njengoko ingxelo yakutshanje ibonisa ukuba I-Galaxy Qaphela i-20 Ngaba ayizukufikeleleka ngakumbi kunangaphambili.
Amaxesha amaninzi, abathengi bathenga iifowuni ezindala xa kuphuma ezintsha. Kungenxa yokuba ayisiyonto ingaqhelekanga kubenzi be-smartphone ukunciphisa amaxabiso eemveliso zabo ezindala emva kokubhengeza abo balandelayo. Isamsung ibonakala inesinye isicwangciso engqondweni.
Ngaba i-Samsung icinga ukuba i-Galaxy Qaphela 10 inokuchaphazela i-Galaxy Qaphela i-20 kunye neeapos?
Ngokwe-leaker @NtsikeleloCanga , Inkampani iceba ukuyeka izixhobo ze-2019 & apos; Ukuba amarhe aphuma, siya kuyibona i-Galaxy S10 kunye ne-Galaxy Note 10 zonyamalala kwiishelufa kungekudala. Imibala emibini eyahlukeneyo yeGold Fold sele belahlekile Isuka kwiwebsite ye-Samsung kunye neapos; yase-US kunye nee-hues ezisandula ukubhengezwa zinokurhoxiswa kwakanye IGalaxy Z Fold 2 ifumaneka ngokulula.
Ingxoxo enkulu ngaphakathi kwi-Samsung kungekudala
malunga nokuba wenze ntoni ngothotho lwe-S10, N10, Fold 1, Z Flip 1, iipilisi, njl
amanye amanqaku exoxwa, kwaye exhomekeke kuwo, ayephambene (imo)
ungothuki ukuba abaqhubeki bethengisa ii-S10 kunyaka olandelayo, bayeke ukuthengisa i-N10 ngoku, njl
-I-Mauri QHD (@MauriQHD) Nge-31 kaJulayi 2020
Ngaba oku kuthetha ukuba i-Samsung yoyika ukuba iifowuni zayo ezindala zingadla imveliso entsha? Inokwenzeka ngokupheleleyo, ngenxa yokuba uluhlu lweGalaxy A kukwabizwa ngokuba kunjalo ukutya kwintengiso ye i-Galaxy S20.
Icala ngalinye, i-Samsung kuthiwa iyayiphucula Uthotho oluqhubekayo , ethi chu ibe yinkomo yemali. Ngokwengxelo entsha, umgca we-midrange uya kuzuza njengelifa le-S20 & apos; isisombululo sesisombululo esiphakamileyo kunye namandla okusondeza.
indawo ye-ip grey vs isilivere
I-Samsung ibulale njani i-Android Wear kwaye kutheni i-Gear S4 ingaphumeleli kwaye ungasebenzisi i-Wear OS
Ithagethi yoThengiso oluMnyama lwangoLwesihlanu luphumile: ulondolozo olukhulu kwiGlass Qaphela 8, i-iPhone 8, izinto ezinxitywayo
I-LG G Stylo yi-smartphone entsha ekumgangatho ophakathi kunye nenkxaso yememori khadi ye-2TB
UBethesda ukumilisela i-Elder Scrolls: Legends kwiifowuni ze-Android ngoJulayi